आफ्नै साथीलाई मा’रे:र उत्तर कोरिया भाग्न खोज्ने श्रीलङ्कन कामदारलाई २० बर्ष जेल सजा’य – Eps Sathi
February 7, 2021 848
दक्षिण कोरियामा एक श्रीलङ्काली कामदारलाई २० बर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। श्रीलङ्काली कामदारले आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने सहकर्मी साथिलाई मारेका थिए। आफ्नै साथिलाई मारेर उनि दक्षिण कोरियाबाट उत्तर कोरियातर्फ भाग्न खोज्दै गर्दा बोर्डरमा रहेका सुरक्षाकर्मीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
आइतबार ख्वाङ्जु उच्च अदालतले २० बर्षको जेल सजाय बढि भएको भनि हालिएको निवेदनलाई अस्विकार गर्दै उक्त सजाय हुने निर्णय गरेको हो। ति २७ बर्षिय श्रीलङ्कन लाई इमिग्रेसन नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनलाई उक्त सजाय तोकिएको हो।
अदालतका अनुसार ति मार्ने गर्ने ब्यक्ति र उनका साथि दुबै श्रीलङ्काका थिए। उनिहरु एउटै कम्पनीमा काम गर्नुका साथै कम्पनीले नै उपलब्ध गराएको होस्टलमा बस्ने गरेका थिए। उनिहरु छल्लानाम्दोको जिन्दो भन्ने ठाउँमा बस्दथे। हत्या गर्ने २७ बर्षिय पुरुषलाई मर्ने ब्यक्तिले बारम्बार सताउने गरेको खुलेको छ। सँगै सुत्ने ढोका राम्रोसँग नलगाएको भनि उनले पि’ट्ने सम्म गर्दथे। उनको पि’टाईबाट रिषाए पछि २७ बर्षिय ति युबकले सहन नसकी उनले मा’र्ने योजना बनाई कोठामा धारि’लो च’क्कू लुकाएर राखेका थिए। मे २९ तारिखमा फेरि २७ बर्षिय ब्यक्तिलाई उनका साथिले कु’टे। यसपटक कुटा’ई खाने ब्यक्तिले सहन सकेनन र लुकाएर राखेको च’क्कू निकाली साथिलाई मारे।
आफ्नै साथिलाई मा’रेपछि उनि खाङवनको उत्तर कोरियाली बोर्डरतिर पुगे। त्यहाँबाट उनले उत्तर कोरिया भाग्ने योजना बनाए। भाग्ने क्रममा बोर्डरमा रहेको सिभिलियन कन्ट्रोल लाईन कट्न लाग्दै गर्दा त्यहाँ सुरक्षामा खटीएका सुरक्षाकर्मीले उनलाई पक्राउ गरे।
ति ब्यक्तिको कोरियामा १ बर्षको भिसा सकिएर पनि इलि’गल रुपमा बस्दै आइरहेको खुलेको छ। उनको भिजा फेब्रुअरी २०२० मै सकिसकेको थियो। बयानका क्रममा उनले भनेका छन् उत्तर कोरिया भागरे त्यहाँबाट उनि चाइना जाने सोचमा थिए।
Prevबर्डफ्लु फैलिएपछि कोरियामा मासु तथा अण्डको मुल्य बढ्यो
Nextअहिलसम्म कतिले भरे ग्रिनलाईफ हाइड्रोको आइपिओ?
कोरियामा अपार्टमेण्टको ४९ औं तल्लामा झ्यालको सिसा पुछ्ने क्रममा खसेर एक श्रमिकको मृ’त्यु
असार १७ बाट मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ खुल्ने, जानौं कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ?
अब बिहे नगरी बस्ने पुरुषले समेत भत्ता पाउने